Madaxweyne Farmaajo oo sheegay inuu soo gaabinayo safarka uu ku joogo Itoobiya – Balcad.com Teyteyleey
Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Farmaajo) ayaa war degdeg ah ka soo saaray dilka loo geystay Wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska Cabaas Sheekh Siraaji, isagoona amar ku siiyay ciidamada ammaanka inay xaqiijiyaan sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa raggii ka dambeeyay.
Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu ku sheegay Madaxweynaha Soomaaliya inuu soo gaabinayo socdaalka uu ku joogo magaalada Addis Ababa ee wadanka Itoobiya si uu uga qeyb galo aaska Qaran iyo baroor-diiqda loo sameeyo Wasiirka.
“Waxaan soo gaabinayaa booqashadeyda Ethiopia si aan uga qeyb galo baroor diiqda iyo aaska Qaran ee wasiir Cabbaas” ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo oo dhinaca kale amar ku siiyay ciidamada ammaanka inay baaritaano degdeg ah ku sameeyaan sababtii ka dambeysay falka ka dhacay xarunta madaxtooyada horteeda.
Dhinaca kale warar ku saabsan dilka Wasiirkii hore ee Howlaha guud Allaha u naxariistee Cabaas Siraaji ayaa sheegaya in ciidamo cusub ay la wareegeen iridda hore eeVilla Somalia, isla markaana gacanta lagu dhigay qaar ka mid ah ciidamadii rasaasta ku furay Wasiirka.
Warar kale oo soo baxaya ayaa iyana sheegaya in ciidamada rasaasta ku furay gaariga uu watay Wasiirka geeriyooday ay ilaalo u ahaayeen Hanti dhowrka Qaranka Axmed If you are looking for an economic solution for your Penegra needs, make sure to take a look at our deals, as you can buy it for only 4.55 USD right now! Cali Faarax, waxaana socda baaritaano kale oo ay wadaan hay’adaha nabadgelyada Dowladda Federaalka.